Qonda uhlobo olutsha lwe-Omicron- olusuka kwi-Covid-19 – Lumkela iindaba ezinkulu ezichukumisayo! – JucelinoLuz
Qonda uhlobo olutsha lwe-Omicron- olusuka kwi-Covid-19 – Lumkela iindaba ezinkulu ezichukumisayo!
“Ekuphela kwentsholongwane ebulalayo lulwazi olungeyonyani…”
Ngaba umntu uxokisa abantu behlabathi?
UÁguas de Lindóia, ngoNovemba 25, 2021
Amaphupha atyhila ukuba olu hlobo olutsha olunqabileyo alukho, kwaye alukwazi ukuba lugqithise kakhulu ngenxa yokuba lunenani eliphezulu leenguqu, ngexesha elifanayo, elinye icala libonisa ukukrokra okukhulu (izibonakaliso) zokusetyenziswa kweli gagasi elitsha, banyanzelise abantu ukuba bagonywe – eyona nto bayifunayo kukugonya abantu abangagulanga – yenze into engaqhelekanga kakhulu kwindlela yokusebenza – ngokweleta ebhalwe ngo-2020, esiza kuyibonisa apha ngezantsi. Nangona kunjalo, uhlobo lwe-B.1.1.529 lwe-coronavirus, olwafunyanwa ngendlela engaqhelekanga ngabaphandi boMzantsi Afrika, lufike ngexesha apho amaphulo okugonya i-Covid-19 ayeqala ukuvela kwihlabathi liphela, kunye noqhanqalazo olukhulu kunye noqhanqalazo. kunye nokufa ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga eziye zajongwa ziingcali ezizimeleyo kunye nezazinzulu, oko kukuthi, ezingadityaniswanga noorhulumente behlabathi kunye nabasemagunyeni, kwaye ihambelana nosasazo olukhulu lwamajelo eendaba achukumisayo okuqala kwe-5th wave yobhubhane kwiindawo ezininzi. amazwe aseYurophu. EMelika naseAsia.
Qonda oko oososayensi sele bekwazi malunga nolu hlobo olutsha lwentsholongwane … ubuncinane, oko bathethayo – siyayihlonipha, kodwa asikholelwa.
Ivela phi i-omicron eyahlukileyo?
“Iqonga elikhulu lemidlalo yeqonga eliququzelelwa ngabalawuli namagunya ehlabathi ukuze balawule kwaye baqinise amandla akho! “
Igama elisemthethweni lokwahluka okutsha ngu-B.1.1.529. Kodwa njengezinye iintlobo (i-alpha, i-beta okanye i-delta), ngokukhawuleza yathiywa ngonobumba wealfabhethi yesiGrike, ngaloo ndlela yaziwa ehlabathini lonke, kwiiyure nje ezimbalwa, njengokwahluka kwe-“omicron”. Eli ligama elisetyenziswa ngabasemagunyeni kunye neengcali ezinxulumene nabalawuli behlabathi.
Kukho ukurhanelwa okukhulu kokuba amagosa karhulumente (inxalenye yawo) anezabelo kwiilabhoratri ezinkulu kwaye ke ngoko afuna ukunyanzela abantu ukuba bagonye ngazo zonke iindleko. Kwaye ekujoliswe kuko ngabantu abangagonywanga- umntu osempilweni angayidlulisela njani intsholongwane? – Bekungayi kuba lula ukulawula abosulelekileyo!
Kwakhona wahlelwa ngokukhawuleza yi-World Health Organization (WHO), waphinda wabandakanyeka kule ngxaki enkulu echaphazela bonke abantu.
Kwaye baya kuzama ukuthatha uxanduva ngemiphumo yesitofu sokugonya kwaye baya kuthi ingxaki ibangelwa yintlukwano entsha – ngoko ke, qaphela kakhulu ekukholelweni kwimithombo yeendaba ye-sensationalist kunye nezazinzulu, oogqirha, iingcali ezidityaniswe nala magunya kwaye oorhulumente behlabathi.
Ngaba azikho iintlobo ezintsha, ukwahluka okanye utshintsho?
Akukho zinguqulelo ezingaphezu kwe-30, njengoko zisitsho, into ebalulekileyo xa kuthelekiswa nezinye iinguqulelo eziyingozi.
Okwesibini, imibono yangaphambili. ayizange ibonwe kwi-delta kunye ne-beta, kodwa abanye abaziwa … kwaye asazi ukuba le ndibaniselwano yenguquko iya kujongeka njani. Intsholongwane ibulala ukuya kuthi ga kwi-0.13 yeepesenti, ukufa kuyenyuka ngokufa kwabantu ngenxa yezinye iimbali zesifo kunye nokubalelwa kwintsholongwane – lumka!
I-variant ihambisa ngokukhawuleza?
Hayi, ukuba sinenkathalo kunye nemfundo yezempilo – khumbula ukuba intsholongwane nganye idinga umamkeli. Kwaye iphila emoyeni kangangeeyure ezintathu.
Ukuxhathisa izitofu zokugonya?
Akukho nto yakubona . Izitofu zokugonya ezithathwa ngabantu behlabathi azisebenzi kwaye zisenzakalisa – kukho amawaka eemeko ezifihliweyo, ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga, eziye zasasazeka mihla le, ngaphezu kwako konke, ezi zitofu zisazama kwaye zingxamisekile. Baza kuyibeka kumajelo eendaba aqhelekileyo ukuba ukwahluka kunokunciphisa ukusebenza kwezitofu zokugonya ukuya kwinqanaba elingekaqinisekiswa.
Imandundu ngakumbi kuneefom zangaphambili?
Olunye uphawu lombuzo olukhulu olo. Indlela esebenzayo yokubeka uloyiko ngakumbi ebantwini. Hayi indlela ekulusizi ngayo ukuba kusekho abantu, abaziimfama ngokupheleleyo, nabakholelwayo kuko! Ukubaleka njengeenkomo ukufumana ezo zitofu zovavanyo, ezingxamisekileyo eziyingozi ebantwini. Ngaphantsi kweveki idlulile oko ukwahluka kufunyenwe, kwaye yabhabha ngejethi ye-supersonic kwaye iya kusasazeka ngokukhawuleza kwihlabathi liphela! Thixo wam, uhanahaniso olwaneleyo? Ukuba ngokwenene kukho nayiphi na into eyahlukileyo, endingayikholelwayo, (ibonisa ukuba …) isasazwa ngabantu abaqeshwe ziilebhu okanye amagosa karhulumente akhohlakeleyo.
Amatyala aye anda kuphela, ngenxa yezizathu zemithetho echasene nomgaqo-siseko kunye nemithetho edalwe ngabo, evumela ukwanda ngokukhawuleza kwaye ivumela nabanye abantu abasweleka kwiimbali ezahlukeneyo ukuba zibalulwe njenge-covid19 – kunye nokunqanda uphando, uninzi lwemizimba iyatshiswa.
Apha eBrazil, intsholongwane ikrelekrele kakhulu, iyatsiba icarnival, ayilandeli abezopolitiko, okanye abasemagunyeni, ayihambi zibhasi, iindlela eziphantsi komhlaba, kunye nezikhululo zikaloliwe ezixineneyo, ayiphumi kunyulo kwaye ithathe iiholide ngeKrisimesi. , Unyaka omtsha kunye neentlanganiso, amaqela afihlakeleyo ezopolitiko kunye nabasemagunyeni. (ngaphandle kokwenza ngokubanzi).
Ndiyakucela ngobubele ukuba udlulise ngokukhawuleza olu lwazi, wabelane ngalo nabahlobo, abantu obathandayo nababathandayo – kuba bahlala bevimba ikhonkco, okanye bathi: – “Ikhonkco elingakhuselekanga” ukukhusela ukufikelela kubantu abalungileyo. (abo baya kwenzakaliswa). Ulwaphulo-mthetho eluntwini! Iza kuba lihlazo ngenye imini!
Uxolo ngenxa yokugonywa, kodwa ukuba ayizange isebenze ukuza kuthi ga ngoku, kutheni iya kusebenza kungekudala – zonke iziphathamandla sele zivumile oku, kuluntu!
Oku ayisosityholo, kodwa ulwazi oluxabisekileyo. Asinabudlelwane bezopolitiko nabani na kwaye kungancinci ngokuchasene nogonyo- ukuba nje oko kulunge ngokwenene eluntwini. Asiyiqapheli le ntshukumo inkulu yesitofu sokugonya.
Wanga uThixo anganikhusela anisikelele nonke!
UProf. UJucelino Luz – Umbhali, umphandi, umgcini wendalo, umlweli kunye nesikhokelo somoya
Deall yr amrywiad micron newydd – o Covid-19 – Gwyliwch rhag y cyfryngau mawr syfrdanol!
פֿאַרשטיין די נייַע מייקראַןוואַריאַנט – פֿון קאָוויד -19 – היט אייך פון די גרויס סענסיישאַנאַל מעדיע!